Ukuphupha ngokungenazintloni Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha ngokungenazintloni. Ukusuka kwimbono yengqondo, ukufunda umxholo wephupha kunokunceda ukusombulula ukungqubana okungaphakathi komntu, eli nqaku liza kukunceda uyazi intsingiselo yengqondo kunye / okanye yokomoya yamaphupha.
Igama elingenazintloni lichaza indlela oziphethe ngayo, isenzo okanye intetho engenazintloni. Eli gama lihlala lifumaneka kwindawo yesini okanye inkanuko.
Ke ngoko, xa utolika uphawu lwephupha, inokuba yinto ebalulekileyo kwimeko apho umfanekiso wephupha uvela khona. Ngaba yayiliphupha elingenantlonelo okanye yayingomnye umntu? Ukhe wayiqaphela le ndlela uziphethe ngayo okanye uthathe inxaxheba kwisenzo sephupha?
1 Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» lubonisa ngaphakathi kokuchazwa ngokubanzi kwephupha elo simahla, ungaziva uthintelwe. Akukho zithintelo zangaphandle zithintela ebomini bakho. Kwinqanaba lesondo, uyazi iimfuno zabo kwaye unokwenza ngokufanelekileyo. Kwakhona, isibindi sakho kufuneka sibonise ephupheni ukuba useluxolweni nesiqu sakho kwaye ubonile ubuchule bakho.
Ukuba umntu oleleyo uvakalise ukonyelisa, ukungaziphathi kakuhle okanye ukuthukisa abanye abantu, kuya kufuneka enze okungakumbi ebomini. Unokuba nomdla kuloo mntu umbonisa isibindi esithile. Ngaba yayingumhlobo okanye umntu ongaziwayo? Mhlawumbi umntu osapho naye?
Ithuku elinamandla okanye ukungabikho kuthintelo kwizinto zesondo ephupheni kunokuqwalaselwa njengokulangazelela komntu olalayo inkululeko yesondo ebomini. Uziva uthintelwe kule ndawo ziimeko zakho zokuphila ngoku kwaye ungathanda ukutshintsha oku. Ukungabikho kobunyulu njengophawu lwephupha kunokubonisa ukuba umntu ngekhe aphumelele kwizinto zothando.
Ukuba umntu undwendwela indawo yokutyela okanye iklabhu ephupheni, enedumela lokuziphatha kakubi okanye ukungaziphathi kakuhle, umntu kufuneka alungiselele umlo, owenzeka ngokuthatha ithuba lokukholelwa kwabanye abantu. Ukuba uyakonwabela ukungakhathali kweklabhu ye-swinger ephupheni lakho, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iminqweno ebomini.
Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yephupha "elingenazintloni" kuthetha isilumkiso kumntu ophuphayo. Kuya kufuneka unike ingqwalaselo ngononophelo kwizenzo zakho ebomini, kungenjalo uya kulahla igama lakho ngephutha lakho.
Ukuba umntu woyika inkqubela phambili kwezesondo ephupheni kwaye azibone zingenangqondo, oku kunokuchaphazela uloyiko lomntu. Umphuphi kufuneka akhathalele iimfuno zakhe kule ndawo kwaye azamkele.
Ukuba ephupheni ukwanga okanye ukwanga kuqondwa ngengqondo yenkanuko okanye njengesenzo esibi, umntu oleleyo ngekhe amkele ngokwasemoyeni umnqweno wakhe womanyano kwinqanaba lokomoya kunye nelinkanuko.
Uphawu lwephupha «ukungabi nazintloni» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lohlalutyo lwamaphupha, ukungabi nazintloni ephupheni kunokuba nento ethile inkohlakalo kwaye ubonakalise kwiindawo ezithile zobomi bomphuphi. Ngamanye amaxesha oku kunokuba luncedo kuye. Amaxesha ngamaxesha, nangona kunjalo, le ndlela yokuziphatha iba yingozi kakhulu.